Ny andrim-panjakanan'ny trano fandraisam-bahiny any New Delhi dia manangona alumni
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Ny andrim-panjakanan'ny trano fandraisam-bahiny any New Delhi dia manangona alumni
Ny Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology any New Delhi, India, dia nanatanteraka fihaonambe alimniôna.
Ny Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology (BCIHMCT) any New Delhi, India, dia nanao fivoriana alimana izay mpianatra manodidina ny 100 teo ho eo no nifandray tamin'ny vadin'izy ireo.
BCIHMCT dia nikarakara ny fivorian'ny alimana tamin'ny 18 aogositra 2018. Manodidina ny 100 ny mpianatra avy amin'ny andiany nahazo diplaoma teo aloha no tonga nifandray tamin'ny alma mater azy ireo. Ireo mpianatra teo aloha dia noraisin'ny talen'ny Dr. Bhupesh Kumar, Dy. ary talen'ny fitantananana Andriamatoa Pradeep Gupta miaraka amin'ny Lehiben'ny Akademia Dr. Sarah Hussain ary koa ny mpampianatra rehetra ary ny mpianatra amin'ny taona farany.
Fifidianana iray hisafidianana toerana maro samihafa ao amin'ny Fikambanan'ny Alumni no notanterahina, ary Andriamatoa Varun Balwani dia voafidy ho filoham-pirenena, Andriamatoa Sahil Rampal dia voafidy ho filoha lefitra, Andriamatoa Manish Malhotra (mpampianatra sampana alumni) dia voafidy ho sekretera jeneraly, Andriamatoa Sumit Gulati sy Andriamatoa Siddhartha dia voafidy ho sekretera iraisana, ary Rtoa Reshma Kamboj (mpampianatra mpikaroka alumni) dia voafidy ho mpitam-bola. Andriamatoa Sushant, Andriamatoa Chetan Chauhan, Andriamatoa Nitin Sharma, Ramatoa Neha Sahni, Andriamatoa Sahil Arora, Andriamatoa Devender, Andriamatoa Gaurav Mitra, Andriamatoa Siddharth Lohani, Andriamatoa Apurv Sareen, ary Andriamatoa Utkarsh Bhalla no voafidy. amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny birao.
Dr. Bhupesh Kumar, talen'ny BCIHMCT, dia namakivaky ny zava-niseho tamin'ny taon-dasa taloha ary niresaka momba ny fandraisana andraikitra vaovao, nanatsara ny laharan'ny oniversite (lah. 1 Private Hotel Management College any Avaratra India), ny andrasana amin'ny alumni, ary ny filàna mitondra mandroso ny lova navelan'ny BCIHMCT.
Fandaharana ara-kolontsaina iray misy dihy folk sy fampisehoana tarika no nanaitra ny mpijery izay narahin'ny fiaraha-misakafo antoandro. Ireo mpianatra teo aloha koa dia niresaka tamin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao momba ny zavatra niainany tamin'ny oniversite sy ny fiainany tany am-piasana niasa tany amin'ny hotely.
Ny Fikambanan'ny Alumni dia handroso amin'ny fivoriana ara-dalàna ary hanao ny fandaharam-potoanany manokana hampiakarana ny fenitry ny BCIHMCT.